I-HTC 11 inokulawulwa yi-Snapdragon 835 | Iindaba zeGajethi
Ifemi ye-HTC ayihambi ngamaxesha amnandi, kwaye njengobungqina boku sinayo into yokuba inkampani ivale iiofisi zayo zorhwebo eSpeyin nase-Itali, ilawula zombini iimarike kwiiofisi zayo e-United Kingdom. Ngethamsanqa, amarhe okuba sipapashe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, apho kwaxelwa ukuba inkampani ingathengisa icandelo layo lokunxibelelana ngomnxeba, saliwe yinkampani yaseTaiwan. Ngelixa i-HTC icacisa ikamva layo kwihlabathi lomnxebaInkampani isebenza kwi-flagship yayo entsha, i-HTC 11, isixhobo efuna ukubuyela kuyo ukuze ibe yinkampani ephumeleleyo kanye, xa ii-smartphones zokuqala zangena kwimarike.
Ngelixa silinde ukumiliselwa kwesi sigqeba sitsha, ekufuneka sinikezelwe ngo-Matshi, kancinci kancinci imigaqo ye-HTC 11. Besikhe sakuxelela ngamanye amarhe akhombe kule ndawo intsha. iya kudibanisa isikrini se-intshi ye-5,5 kunye nesisombululo se-2k. Amarhe amatsha ahambelana nebango le-HTC 11 lokuba esi siginali sinokusebenzisa i-Snapdragon 835, iprosesa yamva nje eboniswe yiQualcomm kwaye yenzelwe ukusebenzisana ne-Samsung.
Kodwa ayizukuba kuphela kwento entsha esiza kuyibona kwi-HTC 11. Enye yamarhe ajikeleze esi siginali, ibango lokuba i-RAM esinokuyifumana kwi-HTC 11 iya kufikelela kwi-8, eya kuthi isinike amandla amarhamncwa ngokuthelekiswa neetheminali esinokuzifumana ngoku kwintengiso.
Ngokubhekisele kwibhetri, esi siphelo sitsha se-HTC siza kudibanisa umtsalane webhetri ye-3.700 mAh ehambelana neCharge 4.0 ngokukhawuleza. Ngokumalunga nokugcina, i-terminal inokubonelela nge-256 GB yokugcina, ikhamera engemva iya kuba yi-12 mpx ngelixa iphambili ye-selfies ingafikelela kwi-8 mpx. Okwangoku yonke into ngamahemuhemu, amarhe okuba ekugqibeleni iqinisekisiwe, Banokusinika isiphelo sendlela esinempawu ezintle Ingayivumela ukuba ibe ngumthengisi ogqwesileyo okoko nje eli xabiso lingashukumi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-HTC 11 inokulawulwa yi-Snapdragon 835
UEduardo Enrique Ramirez Montaño sitsho
Imakethi yase Mzantsi Melika inkulu kakhulu kwaye ngokobuqu ndicinga ukuba iselfowuni elungileyo kakhulu, kodwa inengxaki ukuba izixhobo zifike kule nxalenye yehlabathi zisebenze kwi4g, kuphela ngomqhubi omnye. Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba ungacinga ukuyivulela bonke abaqhubi, ngaphandle kwamathandabuzo oku kuya kunceda ukubanalo olu phawu. Nditsho ngqo eColombia. Ndiyazithanda izixhobo eziveliswe yile nkampani kwaye ndizithengile ezintathu zokugqibela ze-M8, M9 kunye neM10, kodwa ingxaki ichaziwe kwaye kwinkxaso yezobuchwephesha yeHTC abanikezeli ngolwazi olwaneleyo, konke abakutshoyo kukuba kule nxalenye ayisebenzi kwi-4G, kuba iveliswa kuphela kwindawo yaseAsia.
Phendula uEduardo Enrique Ramírez Montaño